Duqii Hore ee Muqdisho oo Ka Hadlay Xasaradaha Ka Taagan Dhulkii Jaamacadaha.
Monday June 03, 2019 - 13:33:48 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabit Cabdi ayaa ka hadlay xasaradaha ka taagan dhulka Jaamacadaha ee magaalada Muqdisho.
Dhulkan oo boqolaal qoys ay degeen sanadihii la soo dhaafay ayaa dhowaan waxaa dowlada federalka ay amartay in laga guuro iyadoo qaar ka mid ah dadkii degenaana ay ka soo horjeesteen amarkaas taasoo dhalisay in maanta dagaal kooban uu dhexe maro dabley hubeysan iyo ciidamada ammaanka.
Taabit Cabdi oo hogaamiya xisbiga Awoodda Shacabka oo ka hadlay dhulalka danta guud ayaa ku taliyay in arrimaha dhulalka danta guud oo ay dowladdu leedahay guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho dowladdu usoo baahato in Guddiga loo xilsaaray ay si nabad ah, dhimrin leh u wajahaan oo marwalba wadada nabadda loo maro oo uusan dhiig ku daadan.
Taabit Cabdi Maxamed oo haatan ah ayaa xusay in iyadoo lagu jiro dhammaadka bisha barakeysan ee Ramadan in laga fiican yahay in dad shacab ah ku barakacaan dagaal dhiig ku daato, iyadoo wadahadal lagu dhameyn karo.
"Waxaan ku baaqayaa in waanwaan wax lagu xaliyo, la iskuna turo maadama aanan sinna la isku huridoonin.”ayuu yiri Taabit Cabdi Maxamed.
"Dhulka danta guud ee dowladdu u baahato iney ugu adeegto shacabka soomaaliyeed waxaa haboon in loo maro wado nabdoon oo aan abuurin rabshado iyo xasilooni darro, madaama qofka deganba uu yahay muwaadinka la doonaayo in loogu adeego.”ayuu sii raaciyay.
Wararka ugu dambeeyay ee la xiriira arrimaha dhulka Jaamacadaha ayaa sheegaya in qaar ka mid ah dadkii degenaa halkaas ay bilaabeen inay ka barakacaan iyagoo ka cabsi qaba in dagaal dhiig uu ku daato ka dhaco halkaas.
Maleeshiyaad hubeysan ayaa aagaga ka sameystey deegaankaas oo ganacsi xoog leh ka jiro,mana jirto illaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir iyo dowlada federalka.